Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5.3 Dhis 4.5.3
Abuuritaanka alaabtaada gaarka ah waa halis sare oo loo maro hanashada abaalmarinta. Laakiin, haddii ay ka shaqeyso, waxaad ka faa'iideysan kartaa goob-celin wax ku ool ah oo wanaagsan oo u sahli kara cilmi-baarisyo kala duwan.
Qaadashada habka aad u dhisayso tijaabadaada adigoo maraya talaabo dheeraad ah, cilmi-baareyaashu waxay dhab ahaantii dhistaan ​​alaabahooda. Waxyaabahaasi waxay soo jiidanayaan dadka isticmaala kadibna waxay u adeegaan inay yihiin goobo tijaabo ah iyo noocyo kale oo cilmi baaris ah. Tusaale ahaan, koox cilmi baarayaal ah oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota ayaa abuuray MovieLens, kaas oo bixiya talooyin ku filan, oo aan la bixin. MovieLens waxay si joogto ah u shaqaynaysay tan iyo 1997, muddadanna 250,000 qof oo diiwaangashan ayaa diiwaangaliyay in ka badan 20 malyan oo qiimeyn oo ka badan 30,000 oo film (Harper and Konstan 2015) . MovieLens waxay isticmaashaa bulshada firfircoon ee isticmaala si ay u sameeyaan cilmi-baaris cajiib ah oo ay ka mid yihiin imtixaannada sayniska ee sayniska ee ku saabsan wax ku biirinta alaabada dadweynaha (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) Caqabadaha algorithmic ee nidaamka lagu talinayo (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Qaar badan oo ka mid ah tijaabooyinkaasi ma aysan suurtoobi lahayn iyada oo aysan jirin cilmi-baarayaal si buuxda u kontaroolaya wax soo saarka dhabta ah.
Nasiib darro, dhisida alaabtaada gaarka ah waa mid aad u adag, waana inaad ka fekertaa sida abuuritaanka shirkad bilow ah: khatar sare, abaal-marin badan. Haddii lagu guuleysto, qaabkani wuxuu bixiyaa inta badan xukunka ka yimaada dhismahaaga tijaabada ah ee xaqiiqda iyo ka-qaybgalayaasha ka yimaada ka shaqaynta nidaamyada hadda jira. Dheeraad ah, habkani waxa uu awood u leeyahay in uu abuuro fikrado wanaagsan oo loo soo celiyo halkaasoo cilmi-baarisyo dheeraad ah ay keenayso alaab ka wanaagsan oo keenaya isticmaalayaal badan oo keena cilmi-baarayaal dheeraad ah iyo sidoo kale (jaantuska 4.16). Si kale haddii loo dhigo, mar haddii wargelin habboon oo la helo, baaritaanku waa inuu sahlanaadaa oo sahlanaado. Inkasta oo habkani uu yahay mid aad u adag, hadda rajadaydu waa in ay noqoto mid wax ku ool ah sida tiknoolijiyada ay u hagaajineyso. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu cilmi-baaruhu rabo inuu xakameeyo badeecada, istaraatijiyad toos ah ayaa ah in lala wadaago shirkad, mawduucaan wax ka qaban doono xiga.
Jaantuska 4-aad: Haddii aad si guul leh u dhisi kartid alaabtaada, waxaad ka faa'iideysan kartaa goob-celin wax-ku-ool ah oo wanaagsan: cilmi-baarisu waxay keenaysaa alaab wanaagsan, taas oo keenaysa in badan oo isticmaala, taas oo keenta cilmi-baaris dheeraad ah. Noocyada noocyada jawaab celin waxtar leh ayaa si aad ah u adag in la abuuro, laakiin waxay awood u yeelan karaan cilmi-baaris aan macquul ahayn. MovieLens waxay tusaale u tahay mashruuc cilmi baaris ah oo ku guuleystay samaynta jawaabo warcelin wanaagsan (Harper and Konstan 2015) .